I-china excavator earthmoving ibhakede abakhiqizi nabaphakeli | UMINYAN
Yamukela amandla aphezulu wensimbi yokwakha esezingeni eliphakeme nekhwalithi ephezulu yebhakede lamazinyo, okusindisa isikhathi sokusebenza futhi inokusebenza kahle okuphezulu.
Okokumba ngomthelela ophansi, izinto zokuhuzuka eziphansi ezinjengokungcola, i-loam, nezingxube ezihlanganisiwe zenhlabathi namatshe amnandi. Isibonelo: Izimo zokumba lapho impilo ye-General Duty tip idlula amahora angama-800. Amabhakede Jikelele Omsebenzi Ngokujwayelekile makhulu osayizi abathandwa kakhulu, futhi asetshenziswa ngonjiniyela besiza ukukumba ngobuningi kuzicelo zokuhuzuka eziphansi. Izakhiwo ezilula zinciphisa isikhathi sokulayisha futhi zikhulise isisindo esingaphakanyiswa. Ama-adaptha wosayizi ojwayelekile namathiphu.
Ibhakede elijwayelekile wuhlobo oludumile phakathi nesikudubuli esincane, luguqula ukujiya kwepuleti elijwayelekile futhi ayikho inqubo yokucaca ebonakalayo. Isici: umthamo wamabhakede mkhulu, indawo yebhakede lomlomo inkulu futhi inendawo enkulu yokubeka, ngakho-ke inendawo yokugcwalisa ephezulu, isindisa isikhathi sokusebenza nokusebenza kahle okuphezulu. Leli bhakede elifanele indawo yokusebenza elula, njengokumbiwa kobumba nokulayishwa kwesihlabathi, inhlabathi kanye nobhuqu. Okubi kusayizi wepuleti mncane, ukuntuleka kwepuleti lokuqinisa, ngakho-ke isikhathi senkonzo sifushane.
Sinikeza uhla oluphelele lwamabhakede emishini kusuka ku-0.01cbm kuye ku-12cbm kumthamo wamabhakede wezinhlobonhlobo zezicelo. Izicelo zifaka ukwakhiwa okukhanyayo nokwakhiwa okujwayelekile, ukwakhiwa kwemigwaqo nezitimela kanye nezimboni zokumba nezokumba.Sakha wonke amabhakede omkhiqizo ngensimbi esezingeni eliphakeme. Singanikeza okunamathiselwe cishe kuwo wonke ama-excavator wemikhiqizo.
Ngaphandle kwamabhakede ajwayelekile, amabhakede amaRocky namabhakede asindayo, siphinde sinikele ngamabhakede enhloso akhethekile, njengamabhakede weTilting, amabhakede wesithupha e-Hydraulic, amabhakede amaSkeleton, amabhakede wokuhlanza, amabhakede e-Grab, i-rake, amabhakede efosholo, i-ripper, ibhakede le-ripper, amabhakede we-loader namanye okunamathiselwe kwe-excavator yakho.Ukupakisha nokulethwaAmayunithi wokuthengisa: Into eyodwaUsayizi wephakheji elilodwa: 20X20X20 cmIsisindo esikhulu esisodwa: 60.000 kg
Uhlobo lwephakheji:I-pallet ejwayelekile yomhlaba wonke noma icala lezinkuni. 1. i-20GP eyodwa ingalayisha cishe izingcezu eziyi-12-14 ama-1.0m3 noma ama-1.2m3 amabhakede we-20ton excavator (Ububanzi obungaphansi kwama-intshi angama-42) 2. i-40HC eyodwa ingalayisha cishe izingcezu ezingama-26-28 1.0m3 noma ama-1.2m3 amabhakede we-20ton excavator; 3. i-20GP eyodwa ingalayisha cishe izingcezu eziyi-8 1.6m3 amabhakede we-30ton excavator; 4. i-40HC eyodwa ingalayisha cishe izingcezu eziyi-16 1.6m3 amabhakede we-30ton excavator.
Ubuningi (Izingcezu) 1 - 2 3 - 10 11 - 20 > 20
Est. Isikhathi (izinsuku) 15 35 49 Kuxoxiswane
Ngemisebenzi ejwayelekile yokumba nokulayisha ubumba, isihlabathi noma enye into evundlile enodoti omncane noma ongenawo noma idwala elikhulu, ukwakheka okuhle kuqinisekisa izakhiwo ezinhle kakhulu zokumba namandla amakhulu.
Izinto zebhakede zesiza
Langaphambilini Ibhakede elincane likha okuncane okungama-70 ububanzi
Olandelayo: Excavator rock ibhakede